Xafiiska – Android – Vessoft
Qoraalada iyo Jadwalka
Ku haboon waxaa dheer in ay baadhaan oo akhriyaan buugaagta. Software waxaa ka mid ah maktabadda weyn ee suugaanta qaybsan qaybaha kala duwan.
ColorNote – buugga xasuus-qorka elektiroonigga ah si loo abuuro qoraalo iyo xusuusino gaar ah oo ikhtiyaar loogu kala qaybiyo midabbo kaladuwan iyo qaybaha.
Microsoft Office Mobile – waa barnaamij rasmi ah oo la shaqeeya Word, Excel iyo PowerPoint dukumiintiyada Microsoft. Codsiga waxaa ku jira qalab dhameystiran oo qalab ah si loo saxo dukumiintiyada noocyada kala duwan.
Buug Electronic loogu talagalay in la abuuro liiska, Gunaanadka, qoraalada u habaynayo ama xafididda.
KOReader – waa barnaamij loogu talagalay in lagu akhriyo buugaagta elektaroonigga ah oo loo arko dukumentiyada EPUB, MOBI, DjVu, DOC, PDF, FB2, TXT, HTML, XPS, iwm.
Amazon Kindle – waa barnaamij lagu daawado laguna soo dejinayo eBooksyada buugaagta ugu weyn buugaagta. Codsiga waxaa kujira jaangooyooyin kaladuwan si loo hubiyo akhriska ugu raaxada badan.
Evernote – qalab loo sameeyo qoraallo ama liisas kala duwan. Softiweerku wuxuu taageerayaa dhexgalka akoonkaaga iyo marin u helida macluumaadka lagu kaydiyay aaladaha kala duwan.
Asana – softiweer diiwaan geliya fikradaha iyo qorsheyaasha howlaha maalinlaha ah. Codsigu wuxuu awood u siinayaa inuu maareeyo howlaha kala duwan oo ay si wada jir ah u saxaan iyaga iyo ka qaybgalayaasha kale ee mashruuca.
software ah in la files Office Microsoft shaqeeyaan iyo u arkaan files PDF ah. software waxa uu ka shaqeynayaan weyn iyo tiro ka mid ah habyaalada.
Kalandarka Google – waa barnaamij wax lagu abuuro oo lagu daawado liiska wax-qabadyada, oo ay la socdaan dhacdooyinka kala duwan. Software-ka wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si wax ku ool ah u qorsheysato jadwalka arrimaha marka loo eego shaqadaada.
Dukumiintiyo Si Aad U Socoto – softiweer si loo sameeyo oo loo habeeyo dukumiintiyada qoraalka, waraaqaha, bandhigyada iyo loo fiirsado faylasha loo yaqaan ’PDF files’.
FBReader – waa fududahay in la isticmaalo softiweer si loogu akhriyo buugaagta elektiroonigga ah qaabab kala duwan. Software-ka ayaa awood u siiya maareynta iyo kala saarista buugaagta qeybaha maktabadda u gaarka ah.